Jiilka labaad ee AirPods Pro wuxuu ku imaan karaa 2 cabir | Waxaan ka socdaa mac
Markii ay Apple sii deysay AirPods Pro, la kulmay mid ka mid ah dalabaadkii ugu caansanaa ee dadka isticmaala AirPods soo bandhigida nidaam joojinta buuqa. Tan iyo hada, waxaa jiray xan badan oo hareeraha jiilka labaad, jiil labaad oo hadii aan iska indhatirno xanta, suuqa ku soo dhici doona rubuca hore ee 2021.
Laakiin, si ka duwan kii hore, jiilkan labaad, waxay ku imaan kartaa laba cabbir oo kala duwan, ugu yaraan haddii aan fiiro gaar ah u yeelanno sawirrada uu Mr · White ku shaandheeyey bartiisa Twitter-ka. Mr · White wuxuu daabacay dhowr sawir oo aan ku arki karno cabbirro isku xirayaal kala duwan ah oo ka dhex muuqan doona jiilkan labaad, labadaba waxaa maareyn doona W2 chip.
Sida ku xusan qoraalkan, AirPods Pro 2 wuxuu yeelan doonaa laba cabbir, wax macno samayn kara iyada oo aan aakhirka la xaqiijin in Apple damacsan yahay sii daayo nooc Lite ah moodelkan, oo ah nooc aan ku biiri doonin nidaamka joojinta buuqa firfircoon ee jiilka Pro.
Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku bixiso qaabkan qiimo ka hooseeya kan hadda jira, in kastoo Macno malahan tan iyo markii ay bixiso astaamo la mid ah AirPods, tan iyo markaa, horeyba waxaa u jiray AirPods. Waxay u egtahay in fiilooyinka lagu muujiyay sawirka ay u dhigmi karaan jiilka saddexaad ee AirPods oo aysan aheyn jiilka labaad Lite ee nooca Pro.
Xanta kale waxay soo jeedinayaan in Apple cbeddel naqshadeynta adoo yareynaya jirida dhegaha, si looga dhigo mid iswaafaqsan, ka tagista astaamaha lagu garto AirPods ilaa iyo markii la bilaabay, oo ay la socoto midabka cad, iyo in shirkado badani ay soo guuriyeen (gaar ahaan kuwa Aasiya) ad nauseam.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Jiilka labaad ee AirPods Pro wuxuu ku imaan karaa 2 cabbir